Detention (2020) – Gold Channel Movies
Dec. 05, 2020 PTS
လျိုယွင်ရှန်းတစ်ယောက် မိသားစုပြဿနာတွေနဲ့ ယူကေကနေ ထိုင်ဝမ်က Greenwood အထက်တန်းကျောင်းကို ပြောင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ မိသားစုအရေးရှုပ်ထွေးနေလို့ စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာနေတဲ့ လျိုယွင်ရှန်းတစ်ယောက် ကျောင်းရဲ့တားမြစ်နယ်မြေမှာ စီးကရက်သွားသောက်မိရာက ကျောင်းသူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်မှုရဲ့မျက်မြင်သက်သေဘဝရောက်သွားပါတော့တယ်။
အတန်းထဲမှာလည်း နတ်ဆိုးစာရင်းအသွင်းခံရတဲ့အတွက် ကျောင်းသားတိုင်းကအနိုင်ကျင့်တဲ့အပြင် ဆရာမကလည်း အတန်းရှေ့မှာအရှက်ခွဲပါတော့တယ်။ ဒေါသပေါက်ကွဲသွားတဲ့ လျိုယွင်ရှန်းတစ်ယောက် တားမြစ်နယ်‌မြေဖြစ်တဲ့ ဟန်ချွေ့အဆောက်အအုံကို ပြန်သွားရာကနေ ဝိဉာဉ်တစ်ကောင်နဲ့ဆက်သွယ်မိပြီး အပေးအယူလုပ်မိရာက ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ။
အဲဒီဝိဉာဉ်ကရော ဘယ်သူလဲ။ ဘယ်လိုအကြောင်းအရင်းနဲ့သေဆုံးသွားတာကြောင့် မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်နေရတာလဲ။ အရာအားလုံးတင်းကြပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဒီကျောင်းမှာ ဘာလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေလဲဝဆိုတာကို ဒီ Detention ဆိုတဲ့ တရုတ် Horror စီးရီးလေးမှာ အသဲတအေးအေးနဲ့ကြည့်ရှုခံစားရင်း အဖြေရှာလိုက်ရအောင်ပါ။ တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ White terror ကို နောက်ခံထားပြီး ရိုက်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သမိုင်းနောက်ခံတွေကြိုက်တဲ့သူများလည်း ကြိုက်ကြမှာပါ။
Translated and Review by Xing Egg & MaryChrist
Size – 630MB / 210MB
WillibomSeptember 18, 2021Reply
လုံးဝdownလို့မရလို့ Fixလေးပြန်လုပ်ပေးကြပါဦး ကျေးဇူးပြုပြီး
DorthySeptember 6, 2021Reply
CaraSeptember 4, 2021Reply
Hi asmr there (bitly.com), this weekend is fastidious in favor
of me, since this time i am reading this great educational
GildaSeptember 1, 2021Reply
end? I’ll check back later and scoliosis surgery see if the problem still exists.
EllieSeptember 1, 2021Reply
Here is my blog post; is asmr (http://bitly.com/)
JeannaAugust 31, 2021Reply
Here is my web page; quest bars but (t.co)
JarredAugust 30, 2021Reply
Stop by my webpage: our quest bars – t.co –
FranceAugust 28, 2021Reply
Hi! I could have sworn I’ve been to this off web hosting site before but
WinDecember 20, 2020Reply
Ep34 ဆွဲလို့မရ
SnowFebruary 8, 2021Reply
Yan Naing WinDecember 6, 2020Reply
Movie နဲ့ အဆက်လား